Qodobka 7: Top 10 Apps si aad iPhone More Secure
Waa u badan tahay in aan la waxaadna aamineysaa in aad iPhone ama ka xun ayaa waxaa la xaday. Ayaa xaaladda ugu xun yahay in warbixin-shaqsiyeedkaaga heli karaa ujeedadu xaasidnimo. Wax macno ah ma tagaan oo aan sheegin xaqiiqada ah in loo helo dadka reer Samaariya ah u wanaagsan maalmahan ku dhow yahay inuu wax aan macquul aheyn. Sidaas waxa xalka ugu wanaagsan? Waa waxqabadka wanaagsan si aad u ilaaliso iPhone leh ugu fiican Apps ammaanka.
Halkan waxaa ku Best Top 10, Trending Apps si loo sugo aad iPhone.
App ammaanka 6.mSecure
9.Hotspot Shield VPN
# 1.POCKET daruurta
Pocket Cloud by Wyse Technology kuu ogolaanaya in aad ku xidhi aad iPhone in ay la shaqeeyaan PC. Waa Details yihiin waa ammaan ah oo dhakhso ah marka helitaanka faylasha, sawirada la xiriir fudud iyo rakibidda. Qiimaha waa waxyar ka badan dhigooda ay laakiin ammaanka damaanad qaaday oo waafaqsan weyn naefigooda, qiimaha.
Tani iPhone Apps waa ka Wickr, LLC. App waxay leedahay hab gaar ah oo la siinayo ammaanka si user iPhone. Taasi waa waxa ay siinaysaa gacanta diraha guud ee diro fariimo burbur ay go'aan ka hela fariinta, munaasabadda iyo sidoo kale muddada. Inkasta oo tani ammaanka App waa bilaash weli hantiyi sirta fasalka awood military oo tirtirtaa xogta marka si buuxda u midaysan si ay u soo diri images, files ka Google Drive iyo sanduuqa dhibic.
Tani app ammaanka iPhone waxaa sameeyay SplashData. App ammaanka qarashgareeyo ayaa code gaarka ah ee kaydinta iyo dareysa macluumaadka xasaasiga ah ee aad iPhone oo ay ku jiraan oo aan ku koobnayn in lagu xisaabiyo tirada, xogta credit card, sirta ah, lambarrada koontada iyo xeerarka diiwaangelinta. The sirta Blowfish xoog Khilaafta amniga adag tan iyo markii ay cancels baxay jiilka password automatic ah, astaanta URL anti-phishing iyo jabsiga ee .Wadashaqayntaas wireless iyo gurmad. User app ayaa sidoo kale abuuri kartaa noocyo kala duwan oo qaybaha iyo diiwaanka customizable.
Waxaa sidoo kale jeebka saaxiibtinimo.
SNAP waa ka 9Bit shaybaadhka, LLC. App waxay u shaqaysaa si fudud u baar shabagga ku wareegsanaa oo aad iPhone in la ogaado router dhow, servers iPhone kale. Waxa kale oo ay u aragto magaca iyo macluumaad kasta oo la heli karaa oo kale iyo soo saaraha qalabka. Waa waa in ay leedahay app ammaanka ay ogaadeen wax dekedaha furan.
In kastoo taasi app SNAP waa raqiis ah weli ay hubisaa in ammaanka ugu badan ee aad iPhone.
ID Falsan yahay iPhone ammaanka app ah freebie by OISTE. Waa user saaxiibtinimo, fudud oo haboon in la isticmaalo. ID falsan waa meel ammaan ah oo lagu kaydiyo macluumaadka sir ay ka mid yihiin tiro PIN, sirta ah, lambarrada koontada, kaararka daacad, sawirada iyo warbixin-shaqsiyeedkaaga kale. Waxay leedahay ikhtiyaar ah u gaarka ah oo dheeraad ah oo aqoonsi wajiga, siidaayay password iyo hannaanka dhibic hubinta xogta shakhsiga muhiimka ah waa Galaydh-free. In hab app ammaanka taas oo ka dhigaysa sida baaraha gaar ah aad dareento.
# 6.mSecure app ammaanka
Tani waa app aamin ah ee ay soo mSeven Software, LLC. mSecure in la Timaadda gurmad utility lacag la'aan ah iyo waa u fududahay ee boorsada jeebka. More ah qaababka ay ka mid auto-qufulka, matoor password, doorasho is burburinta, ilaalinta xogta daruur iyo sirta ah blowfish. Sidaasay xisaab bangi, lambarada amniga bulshada, website-magacyo iyo macluumaad kale oo gaar loo leeyahay oo dhan waa ammaan iyo kalsooni.
Secure FolderPRO waa ka iDevMobile cad.
Waxay leedahay Creech la mid yihiin kuwa mSecure inkastoo ay ka yar SLT. Waxaa damaanad navigation gaarka loo leeyahay, Bookmarks iyo website gaarka ah ee aad iPhone sidaas track taariikhda ka daahsoon lahayn. Waxaa sidoo kale qufulo hannaankii iyo rada code-qufulka u gaarka ah ee aad isku dheggan, sirta, qoraalka, sawiro iyo videos. Waxa ka muhiimsan, waxaad garan kartaa shakhsiyaadka xaasidnimo la raadraaca GPS iyo feature sawir.
Tani waxay sidoo kale waa app kale ammaanka freebie ee ay Apple u iPhone.
App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan aad dhuma ama iPhone isticmaalka map a. Si fudud waxa uu leeyahay fursado kala duwan oo ay ka mid yihiin soo bandhigeen fariin, meesha fog laga xiro aad iPhone, ciyaaro cod ah ama tirtiro xogta gaarka loo leeyahay oo dhan. In kastoo app dhawaaqi laga yaabaa in hoos-sarreeya, hadana qaar ka mid ah shaqada laga cabsado oo ka sii muhiimsan waa casri ah.
# 9.Hotspot Shield VPN
Kulkulul Shield VPN waa ka AnchorFree, Inc.
Waa app xor ah ammaanka oo ka badbaadiyay in aad lacag iyo waqti isku mid ah waxay bixisaa gaarka ah marka la isticmaalayo goobaha WiFi. The feature VPN wuxuu sir gaadiidka sidaas daraaddeed ilaalinta Ciwaanka IP: ga, aqoonsiga iyo sidoo kale istaago taariikhda raad. Waxa kale oo ay ku siinaysaa farriimaha, blocks aad iPhone ka spam, websites xaasidnimo, iyo phishing la software ilaalinta furin. Qaybta ugu fiican waa in aad weli tubada kartaa adeegyada hor istaagay haddii ay yihiin muhiimada in aad. Just in la ogaado, haddii aad Facebook account ama Skype ayaa hore u la ishortaagey u leeyahay cidda aad u shaqayso, gargaarka waa in aad weli soo celin kartid.
App waxaa sameeyay Expensify, Inc. si loo xaqiijiyo ammaanka ugu badan ee aad iPhone.
App Tani free automates aad iPhone in scanner rasiid oon ku qaadan tiirarkii, soo saarida baayacmushtarka ku socotay ah, waxay ku tusaysaa lacagta macaamil ganacsi iyo taariikhda iyo qabsadey rasiidhada in lagu iibsado credit card. Intaa waxaa dheer, in aad la socon kartaa kharashka masaafada aad dhex GPS ah. Kaliya shakhsiyaadka la ansixiyo cinwaanka email kuwa markaas ka heli kartaa email ah oo nuqul ka mid ah PDF warbixintaada.
Si fudud u saaray, app ammaanka Expensify ka dhigaysa raad kharashka in waqtiga dhabta ah mid dhab ah.
Ugu wanaagsan ee 5 talooyin ah ee isticmaala iPhone si loo hubiyo in wixii ay ka badan tahay ammaan
# 1.Use PIN
Maanta, waxaan u isticmaalno iPhone in ay macluumaad muhiim ah sidaas darteed haddii galmo laga yaabaa in aan aakhirka laga badiyay qiimaha leh our. Waxaa lagu talinayaa in aad isticmaasho ammaanka PIN ama farta print ah in ay xirto screen aad si looga hortago faragelinta.
# 2.Use ee passphrase dheer
Halkii la isticmaalayo fudud ah si ay dib ugu yeerto afar lambar PIN, waxa kale oo aad dooran kartaa passphrase dheer. Waxay isticmaalaan calaamado, xarfaha iyo lambarada taasoo sii adkeyneysa in maleynayaa.
# 3.Use ee feature ay isku burburin
Waxaad sameyn kartaa in aad iPhone in masixi oo dhan xog ku saabsan dhacdo in aad ka shakisan tahay tuugu. Tani waa in la yidhaahdo, ka dib markii toban tijaabooyin PIN aan sax ahayn, ka dibna aad iPhone si toos ah marna masixi karin xogta oo dhan. Dhanka kale, arrinta aqoonsiga xiriiri awood iPhone, waxaa jira saddex maxkamadood ka dib markii taas oo qalabka noqon doontaa PIN.
Siri xitaa gudbin karaan xogta gaarka kuu ah marka aad iPhone xiran yahay. Shaqsi iyada oo ujeedadu xaasidnimo weydiin kartaa Siri wixii macluumaad muhiim ah waxaa lagu talinayaa inaad iska fogaysid
# 5.Turn off ah farriimaha
Notifications weli lagu soo bandhigi karaa xataa marka iPhone xiran yahay. Tan waxay cadeyneysaa dhib badan haddii farriimaha ay soo bandhigaan xog muhiim ah. Si looga fogaado badiyay xogta gaarka kuu ah dami aad gaadhsiin.
> Resource > iPhone > Top 10 Apps si aad iPhone More Secure